Mutengo we Mahara Webhusaiti Kuedzwa | Martech Zone
Iyi ndiyo nharo inoenderera ichitsamwa kana zvasvika paInternet… nei ndichifanira kubhadhara mhinduro ini ndichigona kushandisa yemahara? Isu tinoshandisa akawanda emahara kunyorera - asi takapihwa ruzivo rwedu muindastiri, ndinofunga isu takasiyana nemutemo. Sesangano, tiri kunyatsoshandisa tekinoroji yatinoona ichibatsira uye kuiisa kushanda kubatsira vatengi vedu.
Kakawanda kwazvo patinoona vatengi vedu vachishandisa mikana yemahara uye vanoshaya ruzivo rwekuishandisa kana nzwisiso yemhedzisiro yazvinogona kuve pavari pabasa ravo rekushambadzira. Mune ino kesi, ivo vanhu vari Maxymiser vakaita ongororo yakabhadharwa maringe neyemahara webhusaiti kuyedzwa uye vakaona kuti vatengi vakakwenenzverwa kubhadharwa kuyedzwa vane mazana matanhatu muzana mhedzisiro. Izvo hazvifanirwe kunge zvichishamisa, zvakadaro. Iyo huru chikuva kazhinji ine nyanzvi dzinokubatsira iwe kutyaira mhedzisiro uchishandisa yavo chikuva. Mune mamwe mazwi, zviri mukunakirwa kwavo kuve nechokwadi chekuti iwe unoshandisa zvizere kunyorera kwavo kuti ugowana kudzoka kukuru pane kudyara. Chikumbiro chemahara hachipe izvo!
Tags: ab testkusununguka kuyedzwatinokudamutengodzoka pakudyarayokuedzwawebhusaiti kuyedza
Enterprise Vatengi Analytics, Zvemagariro Ongororo uye Mhinduro